Indawo yokulala eyi-3 yokulala yeHolide kwiCottage ekufutshane neStirling - I-Airbnb
Indawo yokulala eyi-3 yokulala yeHolide kwiCottage ekufutshane neStirling
I-Aprili Cottage ligumbi lokulala elinomtsalane eli-3 elakhiwe eClackmannanshire, eyona dolophu incinci eScotland. I-cottage yindawo efanelekileyo yokungena kwiindwendwe ezijonge ukujonga iSkotlani. Inonxibelelwano oluhle kakhulu lokuhamba ukuya kwizixeko ezikhulu zaseScotland ezinjengeStirling, Edinburgh, Glasgow, Perth naseDundee.
Le ndlu ibonelela ngayo yonke into oya kuyidinga kusapho okanye iqela labahlobo ukonwabela iholide yabo yaseScotland.
Le ndlu iphangaleleyo inika indawo eninzi yosapho lonke ukuba yonwabele ngamagumbi okulala amathathu (abandakanya amagumbi amabini okulala kunye negumbi lesithathu lokulala elibonelela ngokhetho lwesithathu lweebhedi ezimbini okanye ezimbini ezingatshatanga) kunye neendawo zokuhlala ezitofotofo kwigumbi lokuhlala, igumbi lokuphumla lesibini / igumbi lokutyela kunye nendlu yasehlotyeni.
Igumbi lokuphumla lesibini likwabonelela ngebhedi yesofa ephindwe kabini enokwamkela ezinye iindwendwe ezimbini.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo libandakanya umatshini wokuhlamba, umatshini wokuhlamba izitya, kunye negadi yabucala enepatio elungiselelwe ukuba wonwabele ilanga kunye noxolo kunye nokuzola kweClackmannanshire.
4.95 · Izimvo eziyi-41
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Clackmannanshire